သေနတ်သံလိုက် Pot သံလိုက် - တရုတ် CS သံလိုက်
သံလိုက်အသင်းတော်များ / devices များ
ရော်ဘာ coated အိုးသံလိုက်
Neo ကို Block ကိုသံလိုက်
Neo ကို Arc / အပိုင်းသံလိုက်
Neo ကို Cylinder သံလိုက်
Neo ကို Disc သံလိုက်
Neo ကို Irregular သံလိုက်
ကော်မှုနှင့်အတူ Neo ကိုသံလိုက်
Neo ကို Ring ကိုသံလိုက်
Neo ကို Sphere / Ball ကိုသံလိုက်
ဒီဇိုင်း & အင်ဂျင်နီယာ
သံလိုက် filter ကိုရေကုသမှုသံလိုက်
သေနတ်သံလိုက် Pot သံလိုက်
Eyelet နှင့်အတူ NdFeB Pot သံလိုက်
မီးခိုး detector များအတွက် 3M သံလိုက်ပန်းကန်
အမြန်သရေကျသေနတ်သံလိုက် mount: ဂွန်သံလိုက် (D36x11.5mm) တိုင်း 10 နှစ်ဟာသူတို့ရဲ့သံလိုက်၏ 1% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဆုံးရှုံးကြောင်းအစွမ်းထက်ရှားပါးကမ္ဘာမြေ Neodymuim သံလိုက်နှင့်ဖွဲ့နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သံလိုက် mounting နဲ့ soft ဗီနိုင်း pad ပါ2recessed တွင်းနှင့်အတူတစ်ဦးရော်ဘာထည်အတွက်ပူးတွဲနေကြသည်။ အဆိုပါ recessed တွင်းသင့်ရဲ့သေနတ်ဟာ mounting ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အဆက်အသွယ်ထဲသို့မဝငျဘူးကြောင်းအာမခံပါသည်။ သံချေးမည်ကိုအဘယ်သူမျှမ gromets ရှိပါတယ်။ သေနတ်တစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သံလိုက်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီသံလိုက်မျှမျှတတသေနတ်အလေးချိန်၏ 25 ပေါင်အထိကိုင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျရှိပါက ...
ဂွန်သံလိုက် (D36x11.5mm) တိုင်း 10 နှစ်ဟာသူတို့ရဲ့သံလိုက်၏ 1% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဆုံးရှုံးကြောင်းအစွမ်းထက်ရှားပါးကမ္ဘာမြေ Neodymuim သံလိုက်နှင့်ဖွဲ့နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သံလိုက် mounting နဲ့ soft ဗီနိုင်း pad ပါ2recessed တွင်းနှင့်အတူတစ်ဦးရော်ဘာထည်အတွက်ပူးတွဲနေကြသည်။ အဆိုပါ recessed တွင်းသင့်ရဲ့သေနတ်ဟာ mounting ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အဆက်အသွယ်ထဲသို့မဝငျဘူးကြောင်းအာမခံပါသည်။ သံချေးမည်ကိုအဘယ်သူမျှမ gromets ရှိပါတယ်။ သေနတ်တစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သံလိုက်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီသံလိုက်မျှမျှတတသေနတ်အလေးချိန်၏ 25 ပေါင်အထိကိုင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျနောက်ထပ်လိုအပ်ချက်များရှိပါကတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ငါတို့အင်ဂျင်နီယာများသင်တို့အဘို့ဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ်ပါ။ OEM လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ယခင်: ရော်ဘာ coated Pot သံလိုက်
နောက်တစ်ခု: သံလိုက် filter ကိုရေကုသမှုသံလိုက်
* CAPTCHA: အဆိုပါ select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. အလံ
CS သံလိုက် CO ။ , LIMITED
ဖုန်းနံပါတ်: 0086- (0) 574-86553381
E-mail ကို: sales@csmagnet.com
ဖက်စ်: 0086- (0) 574-86553371
* CAPTCHA: အဆိုပါ select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. Key ကို